तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिन किन अस्वीकार गरिन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिन किन अस्वीकार गरिन् ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सभामुख चयनको कुरा नमिलेपछि आइतबारको लागि बालाईएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ । बैठक आगामी माघ ६ गतेको लागि सूचना टाँस गरि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुख चयनको लागि आइतबार बिहानैदेखि शीर्ष नेताहरुका बीच छलफल भएको थियो । छलफलमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि सहभागी थिइन् । तर, छलफलमा कुरा नमिलेपछि संसद बैठक स्थगित गराइएको हो ।
सभामुख दिने निश्चित भए मात्रै राजीनामा
बालुवाटार स्रोतले जनाएअनुसार आइतबार बिहानको छलफलमा सहभागि भएकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख पद दिने भए मात्रै राजीनामा दिने स्पष्ट बताएकी थिइन् । उनले न्यायिक रुपमा आफुँले सभामुखको पद पाउनु पर्ने दाबी गरेकी थिइन् । स्रोतले बताएअनुसार तुम्बाहाम्फेले लिखित रुपमा सभामुख पद दिने सहमति भए मात्र प्रक्रिया खुल्ला गरिदिने जनाएकी थिइन् ।
बैठकमा अध्यक्षद्वयले नै पार्टी सचिवायलयको निर्णयअनुसार राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार तुम्बाहाम्फेले सभामुखमा आफुँलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान दोहो-याउँदै राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई नै चुनौति दिँदै अभिव्यक्ति दिन थालेपछि पार्टी शीर्ष नेताहरु बिहानैदेखि तुम्बाहाम्फेलाई फकाउन कस्सिएका थिए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल सभामुखबारे छलफल गर्न आइतबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षमा तुम्बाहाङ्फेको दाउ
नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष देखिएको कारण सभामुख चयन प्रक्रिया अन्यौलमा पर्न पुगेको हो । पार्टी अध्यक्षद्वय केपि शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सभामुख चयनमा शक्ति संघर्ष चलिरहँदा तत्कालीन एमालेकी पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाँसो देखाएकी छिन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेमाथि शीतल निवासले सदासयता देखाएका कारण उनले आफ्नो दाबेदारी बलियो रुपमा प्रस्तुत गरेकाे नेकपा स्राेतले जनाएकाे छ ।
पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्वमाओवादी नेता अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउनु पर्ने अडानमा छन् ।
तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक मिडियामार्फत नै पटक–पटक आफुँ सभामुखका लागि योग्य भएको र स्वभाविक रुपमा सभामुखको पद आफुँले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकी छिन् । नेकपा सचिवालयले शनिबार राजीनामा गराउने निर्णय गरे लगत्तै उनले सार्वजनिक मिडिया मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी थिइन्, ‘मैंले राजीनामा किन दिने ? सभामुखका लागि म पूर्णं योग्य छु । मलाई हटाउने हो भने प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ ।’
नेकपा नेतृत्वसँग विकल्प के ?
पटक–पटकको पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई नै तुम्बाहाम्फेले चुनौति दिन थालेपछि नेकपा शीर्ष तहमा नै अन्यौल सिर्जना भएको छ । सभामुख पद दिने सुनिश्चित गरे मात्रै मार्ग खोलिदिने भनेपछि नेकपा नेतृत्व अलमलमा परेको हो । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पनि निसर्त उपसभामुखले राजीनामा दिएर मार्ग खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पार्टी निर्णयलाई सिधै चुनौति दिँदै शीर्ष नेतृत्वलाई ‘जे गर्नसक्नुहुन्छ गर्नुस्’ भन्ने चुनौति दिएपछि नेतृत्व विकल्प तिर लाग्ने देखिएको छ ।
प्रक्रियागत रुपमा नेकपा नेतृत्वसँग उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउने निर्णय गर्दै राजीनामा दिन लगाउने विकल्प हुन्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा नेकपासँग समानुपातिक सांसदको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्दै महाअभियोग लगाउने प्रक्रियामा जाने विकल्प रहन्छ । तुम्बाहाम्फेले नेकपा शीर्ष नेतृत्वलाई पटक–पटक महाअभियोग लगाएर हटाउनसमेत चुनौती दिँदै आएकी छिन् ।
पुस २७ गते, २०७६ - १४:११ मा प्रकाशित